Mpako ụlọ ọrụ | Martech Zone
Fraịde, Septemba 8, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ dị mfe dịka Pizza mana ha enwetaghị ya.
Enwere ụkọ mpako nke ụlọ ọrụ. Nwere ike ịhụ ihe ịrịba ama nke ya ebe niile ma ọ nwere ike ịbanye n'ime nzukọ ọ bụla. Ozugbo nzukọ ahụ malitere iche na ọ ma ihe karịa ndị ahịa ya, ha na-amalite ịda mba ha. Ọ na-amasị m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekpebi na nke a bụ nsogbu n'ezie mgbe asọmpi ka mma bịara. N'oge ahụ, ha na-ata ụta ọpụpụ nke oke na asọmpi ahụ, ọ bụghị na enweghị ike ha.
Ọ dị ka ụlọ ọrụ kwenyere na ọ nweghị ROS, ma ọ bụ Laghachi na Ọrụ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ nwere nnukwu ahịa churn… na kama na-agbalị idozi ihe iseokwu na-egosi ekele maka ndị ahịa, ha nanị pumping ọzọ dollar iji nweta ahịa dochie ndị hapụrụ. Ha nọgidere na-anwa imeju bọket ahụ na-asọ asọ ruo mgbe ọ nweghị ihe ọ bụla - ha wee nwụọ. Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a nwere nnukwu akpa miri emi, agbanyeghị, ma na-aga n'ihu na-emebi oke ọmarịcha ikike ha nwere ike inwe n'imeso anyị ihe ziri ezi, ikpe ziri ezi, na eziokwu.
na-ewetu onwe ya ala, ndị mpako, ndị na-eme mkpesa, ndị na-eleda anya, ndị na-etu ọnụ, ndị dị elu, ndị nwe ụlọ, ndị na-elekọta onwe ha, smart smart, snobbish, snooty, supercilious, elu, uppish, uppity - Thesaurus.com - Mpako
Lee ụfọdụ ezigbo ihe atụ nke mpako n'izu a:
Samsung - mgbe onye ahịa sere ihe nfe ọfụma ọ bụ imebi ekwentị, Samsung kpebiri ịme iwu gbasara onye ahịa karịa idozi ekwentị ahụ.
Katherine Harris kwuru - mgbe o zipụrụ blog ya na ọdachi ọhụụ nke mkpọsa, ọ na-egosi na ndị ọbịa ya abụghị ndị ọzọ karịa ndị na-ezigara ozi sitere na ụlọ ọrụ wuru saịtị ahụ.
HP - kama ịrụ ọrụ iji wulite ngwaike ka mma (anyị nwere onye ọgbaghara HP ọhụrụ na-arụ ọrụ nke edochi taa… Echere m na anyị nwere ike ịnweta peeji 1 n'etiti nrụzi ọ bụla), HP kpebiri n'ụzọ ụfọdụ na nnyocha ndị ọrụ ụlọ ọrụ ha ga-eweta nsonaazụ ka mma … Mmadụ kwesịrị ịkọwara m ihe a. Otu ụlọ ọrụ na-anaghị asọpụrụ ndị ọrụ ya abụghị nke m chọrọ iso na-akpakọrịta.
Ask.com - Na-agbali iji ojiji nke engine nchọ ya, Ask.com na-ebupụta mgbasa ozi mgbasa ozi iji gbalịa ma dọta ndị ọrụ. Gini mere ị gaghị ewere ego ahụ wee mepụta ngwaahịa bara uru? Echere m na ebe ha chere na ha nwere ihu ọma ụlọ ugbu a, ndị mmadụ ga-eji ha mee ihe.
Apple - kwetara na enwere nsogbu 'obere' ya MacBook na-akpaghị aka. Nkọwa nke 'ntakịrị'? Oke ọnụ maka icheta.
Microsoft - Emela nnukwu ngwaahịa, naanị ka mmadụ niile budata ya na-ajụghị ha site na ịkpọ ya 'mmelite dị oke egwu'. M dere banyere nke a. Ọ dị ka ebumnuche ha ọ dị ntakịrị karịa ka m cheburu, site na ịgbanwee igwe nchọ gị na MSN n’elu nwụnye IE7
Ticketmaster - Nile mmepe kwesịrị iburu n'uche nke a… na Canada, Ticketmaster a na-gbara akwụkwọ n'ihi na ha na ebe nrụọrụ weebụ bụ adịghị enweta site na folks na nkwarụ. Enweghi ike ịnweta saịtị m n'ụzọ zuru ezu ma akụkọ a bụ ọkọlọtọ na-acha uhie uhie. Anyị niile kwesịrị ịgbalịsi ike ịnye ndị ahịa niile ọrụ! Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ naanị ihe metụtara akụ .. ọ nweghị ihe ọzọ. Nakwa, ọ bụ ụzọ iji nye ndị ahịa gị ma ọ bụ atụmanya n'echiche na ị na-elekọta.
Akụkọ ụfọdụ nwere njedebe na-enye obi ụtọ, agbanyeghị:
Facebook - site na ntọhapụ ọrụ ọhụụ kachasị ọhụrụ, Facebook na-emetụta nchedo nzuzo ndị ahịa ha n'amaghị ama. Ekwenyesiri m ike na ha ga-agbake na ekele ndị isi ụlọ ọrụ.
Digg - iji gbalịa ịnye akụkọ dị mma maka akụkọ na igwe ntinye igwe ha siri ike, Digg rapaara ya na ndị ọrụ ike ya, ndị nwere ike iji usoro a maka uru ha. Digg mere mkpebi ziri ezi site na imeziwanye ọrụ ya nye ndị ahịa niile kama ndị Diggers ole na ole na-enwetawanye ike.
GetHuman na Bringo / NoPhoneTrees.com na-achịkọta ikike inye nghọta banyere otu esi ewepu usoro ekwentị akpaghị aka iji nweta ezigbo olu na nsọtụ ọzọ nke ekwentị.
ZipRealty - saịtị nke na-enye ndị mmadụ ohere itinye ihe ha kwuru n'ịntanetị banyere ụlọ ha gara leta bụ maka ọrịre.
Ford - ebe ụlọ ọrụ anaghị eme nke ọma, Ford na-enwe obi ike. Ọbụna obi ike iji gbanwee ụfọdụ ad dollar na blọọgụ a ma ama!
Enwere m olileanya na ị ga-ahụ mmekọrịta ebe a businesses azụmaahịa na-aga nke ọma na-agagharị iji meziwanye mmekọrịta, ngwaahịa na ọrụ yana ndị ahịa ha ebe ụlọ ọrụ ndị ogbenye na-eleghara anya, na-ama aka, na-emegbu mmadụ ma na-eche echiche na ndị ahịa ha. A sị na anyị niile nwere ike icheta na:
Gaghị enwe ike ịghọta etu ngwa ahịa gị dịruru onye ahịa gị mkpa.
I nweghi ike ihu uzo igbanwe ngwa ahia gi gha emetuta ndi ahia gi rue mgbe i mere.
Do ghọtachaghị etu ndị ahịa gị si eji ngwaahịa gị.
Ọ bụrụ n ’ikwughi / nụ / na-asọpụrụ / na-ekele / nweere / mgbaghara / ndị ahịa gị, onye ọzọ ga-eme.
Onye ahịa gị na-akwụ ụgwọ gị.
Told gwara m ihe ị ga-ere m. Agwara m gị otu m si chọọ ya. Gwara m mgbe m ga-enweta ya. Delivered nyefere m ya mgbe ị kwuru na ị ga-eweta ya. Delivered napụtara ihe ị kwuru na ị ga-eme. Delivered nyefere ihe m rịọrọ gị. Egoro m gị. I kelere m. Ekelere m gị. Aga m enye iwu ọzọ n'oge adịghị anya.
Ọ dị mfe dị ka Pizza.
Ihe ọkacha mmasị na-adabere na teknụzụ?
Sep 8, 2006 na 7:46 PM
Iju ole na ole na-enweta isi echiche. Earl Nightingale tọọrọ ya ogologo oge gara aga. Get na-akwụ gị ụgwọ na azụmahịa maka ezigbo ọrụ ị na-enye.
Sep 9, 2006 na 5: 44 AM
Edere Doug nke ọma, anụtụbeghị ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ na mbụ.
Sep 16, 2006 na 2: 28 AM
Okwu a na-achịkọta ọtụtụ ihe mere n'oge ntụpọ ọganihu na bust.
"Companiesfọdụ ụlọ ọrụ nwere nnukwu ahịa ha churnâ? ¦ kama ịnwa idozi nsogbu ahụ ma gosipụta ekele maka onye ahịa ahụ, naanị ihe ha na-eme bụ ịmatakwu dollar iji nweta ndị ahịa iji dochie ndị hapụrụ."
Obi tọrọ m ụtọ na post.